अफिसर र सिपाहीबीच याे रमाइलो चुट्किला - Everest Dainik - News from Nepal
अफिसर र सिपाहीबीच याे रमाइलो चुट्किला
पुलिसको एउटा अफिसरले एकदम रिसाएर सिपाहीलाई भनेछ ।
अफिसर : मैले यो सुने कि हिजो तिमीले एकदम मात्तिने गरी रक्सी पिएर सडकमा ठेला गुडाउँदै खुब हल्ला मच्चायौ रे, यस्तो चर्तिकलाले हाम्रो पुलिसको के नाम रहन्छ ? तिमीले सोचेको छौ ?
पुलिस : यो त तपाईंलाई मभन्दा धेरै थाहा होला नि, ठेलामा त तपाईं सवार हुनुहुन्थो त ।
याे पनि पढ्नुस रमाइलो चुट्किलाः कमिला र हात्तीबीच रमाइलो गफ
ट्याग्स: funny joks